"The Porn Trap" - Porn On Your Brain
ဖတ်နေ Started အဆိုပါ Porn Trap Wendy နှင့် Larry Maltz တို့ကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေစွဲလမ်းမှုကိုကျော်လွှားရန်အကြောင်းများစွာဖြစ်သည်။ ဒါဟာမှောင်မိုက်လမ်းများသို့သွား။ , သူတို့၏ဘဝဆိတ်ကွယ်ရာမြင်ကြပြီ, ပုံမှန်ဘဝပုံစံသို့ပြန်လာရန်စိတ်ပိုင်းဖြတ်ရှာသောငါ့ထက်အများကြီးပိုဆိုးစွဲလမ်းနှင့်အခြားရဲ့ပုံပြင်များကိုဖတ်ရှုဖို့အလွန်လှုံ့ဆျောမှုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစာအုပ်ကငါလုပ်နိုင်တယ်။ ငါလည်းလုပ်နိုင်တယ်။ ဒီစာအုပ်ကငါလုပ်နိုင်တဲ့လမ်းညွှန်ချက်တွေ၊ လေ့ကျင့်ခန်းတွေ၊ အထူးသဖြင့်ငါ့လက်တွေအပေါ်မှာအချိန်အများကြီးပေးတယ်။
စာရေးသူ Wendy Maltz says:
ကျနော်တို့နာလန်ထူအပေါ်တစ်ဝက်စာအုပ်သုံးဖြုန်းပြီးအသေးစိတ်အရင်းအမြစ်များကိုအပိုင်းရှိသည်။ အကြှနျုပျ၏က်ဘ်ဆိုက်လည်းညစ်ညမ်းပြန်လည်ထူထောင်ရေးနှင့်အတူကူညီပေးဖို့အခမဲ့ဆောင်းပါးများနှင့်ဒေါင်းလုဒ်လုပ်လို့ပိုစတာရှိပါတယ်: www.healthysex.com။ [အပေါ်သူတို့ရဲ့ website စာမျက်နှာကိုသွားရောက် အဆိုပါ Porn Trap.]
အဆိုပါစာရေးဆရာ porn နုတ်ထွက်ဤခြောက်လအခြေခံအရေးယူခြေလှမ်းများအကြံပြု:
သင့်ရဲ့ညစ်ညမ်းပြဿနာနှင့် ပတ်သက်. တစ်စုံတစ်ဦးကိုပြောပြပါ
အဘယ်သူသည်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးပြဿနာများနှင့် ပတ်သက်. သနားကရုဏာနဲ့ sensitivity ကိုရှိသနည်း
သူကားအဘယ်သူနားလည်သဘောပေါက်ခြင်းနှင့်စွဲလမ်းနှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးနှင့် ပတ်သက်. တတ်ကျွမ်းနားလည်တဲ့သလဲ?
ဂယ်ရီကိုနားထောင် အင်တာဗျူး Wendy Maltz မိမိအရေဒီယိုရှိုးပေါ်မှာ။